Rasmiga cusub ee Huawei Nova 8 SE: astaamaha, qiimaha iyo helitaanka | Androidsis
Huawei Nova 8 SE waa rasmi oo leh 66 W lacag degdeg ah iyo shaashadda OLED
Sida ay Huawei ku dhawaaqday maalmo ka hor, Nova 8 SE cusub ayaa rasmi ah maanta. Taleefankan casriga ahi wuxuu u yimaadaa sida khadka dhexe ee dhexe oo leh astaamo xiiso leh iyo qeexitaanno farsamo oo aan si buuxda hoos ugu sharxi doonno.
Waxyaabaha mudan in la ogaado marka horeba waa tikniyoolajiyadda degdegga ah ee lagu buuxiyo taas oo batteriga weyn ee moobilkani ku habboon yahay. Muuqaal kale oo xiiso leh oo ka mid ah terminaalkan ayaa ah in lagu bixiyo laba nooc, oo ku kala duwan iyaga oo leh laba qalab oo kala duwan oo loo yaqaan 'Mediatek processor chipsets'.
1 Noocyada iyo tilmaamaha farsamada ee Huawei Nova 8 SE
Noocyada iyo tilmaamaha farsamada ee Huawei Nova 8 SE
Waxa ugu horreeya ee aan kala kulanno shirkadda 'Nova 8 SE' ee Huawei waa shaashadeeda, taas oo ah teknolojiyadda OLED oo leh jajab dhererkiisu yahay 6.53 inji. Xalka ay kani soo saarayso waa FullHD + oo ah 2.400 x 1.080 pixels. Heerka cusbooneysiinta ee tani waa 60 Hz, heerka; Qiyaasta 90 Hz way fiicnaan laheyd, ugu yaraan, laakiin waa waxa ay tahay. Halkan waa in sidoo kale la sheegaa inay jiraan qashin isku mid ah qaab dhibic biyo ah iyo jaziirado aad u yaraaday.
Iyada oo casrigaan casriga ah waxaan haysannaa xusuus RAM ah nooca LPDDR4X iyo meel gudaha ah oo lagu kaydiyo oo ah 128 GB UFS 2.1. Ka sokow, Nova 8 SE waxaa laga heli karaa Cabirka 720 SoC ama Dimensity 800Labaduba waxay ka socdaan Mediatek oo ku shaqeynaya ugu badnaan saacadda oo ah 2.0 GHz, in kasta oo ay ugu wacan tahay qaabeynta aasaasiga ah kan dambe ayaa ka awood badan.
Batariga mobiilkan hoostiisa ku jira wuxuu leeyahay awood 3.800 Mah oo waxay la jaanqaadi kartaa 66W tikniyoolajiyadda degdegga ah ee lacag-ku-shubidda. Dammi-soo-qaadku wuxuu marayaa dekedda USB-C waxaana lagu dhammeeyaa wax ka yar saacad. Batariga wuxuu caawiyaa in dhumucda taleefanka ay tahay 7.46 mm culeyskiisuna yahay 178 garaam.
Dhinaca kale, marka loo eego qaybta sawir qaadista, waxaa jira shanlo afar geesle ah oo ku yaal dhabarka, kaas oo inta badan ka kooban 48 MP oo leh f aperture f / 1.9, kamarad 8-gees leh oo ballaaran oo leh f / 2.4, dareeraha a 2 MP oo leh f / 2.4 aperture iyo 2 MP makro shooter oo leh f / 2.4 aperture. Dareemayaashaas waxaa lagu hayaa qayb ka mid ah barnaamijyada na xusuusinaya iPhone 12, maadaama ay tahay laba jibbaaran oo waxay ku yaalliin geeska bidix ee kore ee qeybta dambe. Kaamirada hore, dhanka kale, waa 16 qaraar MP.
Smartphone-ka cusub wuxuu kaloo taageeraa isku xirnaanta 5G SA / NSA wuxuuna la yimaadaa ac Wi-Fi iyo Bluetooth 5.1. Ka sokow, waxay leedahay akhristaha faraha oo ku dhexjira shaashadda, taas oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah inay tahay teknoolojiyadda OLED; Xusuusnow in IPS LCD-yada aysan taageerin nidaamkan furitaanka biometric-ka.
MUUQAAL 6.53-inch OLED oo leh FullHD + xalka 2.400 x 1.080 pixels /
PRORESOR Cabbir 720 ama Cabbir 800
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 128 GB
CHAMBERS Gadaal: Main 64 MP (f / 1.9) + 8 MP Wide Angle (f / 2.4) + 16 MP Macro (f / 2.4) + 2 MP Bokeh (f / 2.4) / Xagga hore: 16 MP
BATARY 3.800 mAh oo leh 66-watt tikniyoolajiyad degdeg ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 hoosta EMUI 10.1 lakabka habeynta
Isku xirnaanta Wi-Fi 802 ac / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Taageerada Dual-SIM / 4G LTE / 5G SA iyo NSA
MUUQAALO KALE Sawirka Sawirka Sawirka / Aqoonsiga Wejiga / USB-C
Qiyaasaha iyo Miisaanka 7.46mm qaro weyn iyo 178g
Huawei Nova 8 SE wuxuu ku yimaadaa midab madow, cadaan, buluug iyo qalin. Kani waxaa laga bilaabay Shiinaha waana la iibin karaa dalkaas. Noocyada tan iyo qiimayaashooda waa sida soo socota:
Huawei Nova 8 SE oo leh Cabbir 720: 2.599 yuan, qiyaastii 333 euro in la beddelo.
Huawei Nova 8 SE oo leh Cabbir 800: 2.699 yuan, qiyaastii 346 euro in la beddelo.
Ma jiraan wax faahfaahin ah oo wali tilmaamaya goorta taleefankan casriga ah ee dhexdhexaadka ah lagu soo bandhigi doono adduunka. Si kastaba ha noqotee, waxaan saadaalineynaa in todobaadyo yar gudahood soo saaraha Shiinaha uu ku dhawaaqi doono helitaankiisa dhulal kale sida Yurub. Tani waa la arki doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Huawei Nova 8 SE waa rasmi oo leh 66 W lacag degdeg ah iyo shaashadda OLED
Xiaomi Mi Box 4S Pro, kani waa Xiaomi 8K TV Box cusub
Redmi Xusuusin 9 wuxuu ku heli karaa nooc kala duwanaansho 120 Hz ah